Nanatanteraka atrikasa mahakasika ny fananan-tany ny SIF na Sehatra Iombonana momba ny Fananan-tany sy ny «Transparency International initiative Madagascar» ary ny mpiara-miasa samihafa amin’izy ireo. Misehatra eny anivon’ny tontolo ambanivohitra sy ny resaka fananan-tany ny mpizaika. Isany nandray anjara tamin’izany ny BIMTT. Izany dia natao hijerena manokana ny fananan-tany sy ny olana misy eo aminy.
Ity fihaonana ity dia natrehin’olomanan-kaja maro. Ary nojerena manonkana tamin’izany ny olana mianjady amin’ny vahoaka malagasy momba ny fananan-tany. An-tanan-dehibe ka hatrany ambanivohitra dia tsy afa-miala amin’ny olana ateraky ny fananan-tany. Izany indrindra no nanomezana ny lohahevitra hoe “Raharaha iombonan’ny rehetra ny fananan-tany”.
Niavaka ity atrikasa ity satria narahina fandefasana horonan-tsary tahirin-kevitra mahakasika ny olana momba ny fananan-tany misy eto Madagasikara. Nasongadina tamin’izany horonan-tsary tahirin-kevitra izany ihany koa fa ianjadian’ny tsindry hazo lena amin’ny lafiny maro samihafa ny vehivavy. Hany ka mananosarotra ny zo fisitrahany ny tany tokony ho anjarany. Mitana anjara toerana lehibe amin’izany ny fisian’ny fomban-drazana izay manao ankilabao ny vehivavy amin’ny fandovana. Eo ihany koa ny fakana an-keriny ny tanin’olona maro samihafa vokatry ny hafetsifetsena ataon’ny olona mahitahita sy manambola.Izany anefa dia tsy tokony tazanim-potsiny fa maro ny mitondra fangirifiriana vokatr’izany. Mitana anjara toerana lehibe ho an’ny firenena ny fananan-tany. Dingana lehibe mitondra any amin’ny fampandrosoana ara-ekonomika sy ara-tsosialy ny fitoniana eo amin’ny fananan-tany. Tsy ho tanteraka velively izany fandrosoana izany raha tsy ny ankamaroan’ny tany rehetra ao amin’ny firenena no manana taratasy manaporofo ny maha-tompony, raha ny fandinihan’ ny manampahaizana. Koa mikorosy fahana ny firenena raha toa ka tsy voavaha ny mahakasika izany.
Ny vehivavy sy ny fananan-tany
Ny vehivavy dia manana andraikitra lehibe eo amin’ny tontolo ambanivohitra. Kanefa dia mihena ny ny fahefany mahazo tany. Araka ny fanadihadiana natao dia laharana faha 8 ny vehivavy eo amin’ny fandovana na tsy mandova mihintsy. Na dia manana taratasy ara-dalàna aza anefa dia tsy mety afaka ny olana maro samihafa. Hita fa tsy manana tombony mihitsy ny vehivavy ary ny ankamaroany dia tsy mahafantatra n’inon’inona momba ny fananan-tany mihitsy. Ny sasany mba mahafantatra dia iharan’ny kolikoly maro samihafa.
Tsy misy filaminana ny tany eto Madagasikara. Inona no tokony hatao?
Nandritra ny atrikasa notanterahina dia hita fa tsy manana politika mazava ny fananan-tany eto Madagasikara. Maro amin’ny kadasitra no tsy vita hatramin’ny farany ny fikarakarana noho ny olana maro samihafa. Lafo loatra ny fikarakarana ny atontan-taratasy. Voatsindry loatra ny vehivay eo amin’ny fisitrahana ny tany. Ireo tany nampiasain’ny mpanjanan-tany ireo dia tsy mety tafafindra amin’ny olona izay efa nitoetra ela teo.
Koa rehefa nirosoana ny ady hevitra maro samihafa nandritra ny atrikasa dia niara-nanapa-kevitra ny rehetra fa: Ho hamafisina ny rafitra rehetra izay efa misy eto Madagasikara momba ny fananan-tany. Ka hatao marihitra ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana. Hoezahina ny hampisy ny mangarahara eo amin’ny sehatry ny fananan-tany. Ary entanina ny rehetra mba tsy hanao ankilabao ny vehivavy eo amin’ny zony momba ny fisitrahana ny tany.